Izinzuzo Zethu - Aojie Mold Co., Ltd.
1. Le nkampani ine-R & D yobuchwepheshe kanye neqembu lokukhiqiza, imishini yokukhiqiza ethuthukile, ubuchwepheshe bokuklama isikhunta abanekhono kanye nobuchwepheshe obuhle kakhulu bokukhiqiza isikhunta. Ikakhulukazi isikhunta sezidingo zansuku zonke, isikhunta sodonga oluncane, nesikhunta sokugoqa. Le nkampani isebenzisa imodeli yokuphatha yanamuhla ukuhlinzeka amakhasimende ngezinsizakalo eziphelele nezisezingeni eliphakeme. Futhi ukunamathela kumqondo wokunikeza amakhasimende izixazululo ezinhle kakhulu nezingakhathazeki zokwakha isikhunta. Imikhiqizo ithengiswa phesheya kwezilwandle futhi iwine ukwethenjwa nokuqashelwa kwamakhasimende asekhaya nakwamanye amazwe.
2. Kususelwa kumqondo wokuba ngongcweti, ocijile futhi oqinile, inkampani izoqhubeka nokusungula nokwenza ngcono nabantu abaqeqeshiwe ukwenza izinto zobungcweti kanye nohlelo lokuphathwa kobuchwepheshe njengesisekelo. Ngaso sonke isikhathi yakha i-Aojie Mold ibe yinkampani eplastikhi yesikhunta esisebenza ngokuqinile kanye nebhizinisi lokukhiqiza!
3. Ake siqonde izidingo zakho. Ukukunikeza ngensizakalo enhle kakhulu yobuchwepheshe bokubumba epulasitiki. Sizolalela yonke inkinga yakho yezobuchwepheshe. Lwela ukuba umphathi wakho wesikhunta. Sinaka imininingwane bese sihambisa isikhunta. Sinaka ikhwalithi bese sijova impilo kwizikhunta. Siyayazisa imiphumela futhi sikunikeza isikhunta esingakhathazeki.
4. Impendulo esheshayo: thembisa ukukunikeza imiyalo eningi yemali ekhokhwayo nolwazi lomkhiqizo ngesikhathi esisheshayo; thembisa ukulungisa imikhiqizo oyidingayo ngesikhathi esifushane; ngithembisa ukukwenzela uhlelo oluhle kakhulu lwesabelomali ngenani elihle kakhulu.
5.Imikhiqizo esezingeni eliphakeme namanani entengo: Inkampani yethu ithenga izinto zokusetshenziswa ezahlukahlukene kubakhiqizi futhi ithenga izinto zokusetshenziswa ezahlukahlukene ngobuningi ukunciphisa izindleko zenkampani, futhi iqinisekise ukuthi imikhiqizo ingeyekhwalithi ephezulu futhi inamanani aphansi, futhi iyasizakala ngempumelelo yesilinganiso senkampani yethu Okuthandwa Amakhasimende